Mutevedzeri Wemutungamiriri weRiberian akabhururuka akaenda kuGhana nekunetseka kufema
Mutungamiri wenyika weLiberian anokwira kuGhana ainetseka kufema
Mutevedzeri wemutungamiriri weLiberia, Jewel Howard-Taylor, akaendeswa kuGhana kurapwa mushure mekutadza kufema, zvichitevera kuburitswa kwenhau kubva kuhofisi yake.
Mme Taylor vakabuda munyika neChipiri masikati mushure mekugara mazuva mana mukiriniki yakazvimiririra muguta guru reMonrovia.
Vanachiremba mukiriniki vakakurudzira kuendesa kwake mushure mekugadzikana, hofisi yake yakati.
Iye aramba midhiya enhau anobatanidza matambudziko ake kuCovid-19, chirwere chekufema chinokonzeresa nekoronavirus.
Iko kushaya simba kwehurongwa hwehutano hweLiberia, zvichitevera hondo yevagari iyo yakapera makore gumi nemanomwe apfuura, yakaona vakuru vehurumende nevapfumi vachigara vachienda kunze kwenyika kunorapwa.
Kuendeswa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika kuGhana kwakaita kuti vatepfenyuro vafarire nhepfenyuro muMonrovia neChitatu, paine kushushikana kukuru pakukwikwidza muhutano.
Muzvare Taylor, makumi mashanu neshanu, mukadzi waimbove mutirongo aimbove Mutungamiri weLibya Charles Taylor. Akave mutevedzeri wasachigaro weaimbova mutambi wenhabvu George Weah muna 56 sechikamu chemubatanidzwa.
Aiwanzogunun'una kuti haana kubatwa seyechipiri pakurayira.
Nei kuvenga Fally Ipupa..Tala Innos B na charly na Ferre G. balingi chii? - Vhidhiyo
Zoom pane chipfeko chekaDJ Arafat_ Eunice HONHE_ Radio La Frontière - Vhidhiyo